ⓘ ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
စိုးလွင် (မန္တလေး) ဒေါက်တာ
ဓမ္မလမ်းဝိပဿနာအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်ဟောကြားသူ ဒေါက်တာစိုးလွင် သည် အဖဦးသန်းအောင် အမိ ဒေါ်ဝင်းမေတို့မှ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာစိုးလွင်သည် ၁၉၈၉ – ၉၀ ခုနှစ်တွင် မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော နန်းရှေ့ မန္တလေး ဇီဝိတသံဃာ့ဆေးရုံ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ရွှေရည်လှ နှင့် အိမ်ထောင်ပြု၍ သမီး မထူးရည်လွင် ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာစိုးလွင်သည် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာစိုးလွင်သည် ၁၉၉၀-၉၁ မှစ၍ ဓမ္မစာပေများကို ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ မင်းကွန်းဆရာတေ ...
အောလ်ဆန်မြို့ သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ၇မြို့မြောက် မက်ထရိုပိုလစ်မြို့ဖြစ်ကာ ၈မြို့မြောက် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။တရားဝင်အားဖြင့် အောလ်ဆန် မက်ထရိုပိုလစ်တန် မြို့ဟုခေါ်ကြသည်။လူဦးရေ ၁.၁ မီလီယံ ရှိသည်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိကာ တောင်ဘက်တွင် ဘူဆန်မြို့၊ မြောက်ဘက်တွင် ဂျောင်းဂျူမြို့တို့ တည်ရှိသည်။ အောလ်ဆန်မြို့သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ စက်မှု ထုတ်ကုန်မြို့တော်ဖြစ်ကာ အောလ်ဆန် စက်မှုခရိုင်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကား ပစ္စည်းစက်ရုံဖြစ်သော Hyundai မော်တာ ကုမ္ပဏီ၏ ကားပစ္စည်းစက်ရုံတည်ရှိသည်။ Hyundai Heavy Industries၏ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သင်္ဘောကျင်းလည်း တည်ရှိသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာပြည်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ် ၅ ခုအနက် မန္တလေးမြို့တွင်ရှိသော ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဆေးပညာဘွဲ့ နှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ၊ ဆေးလက်တွေ့အခြေခံပါရဂူဘွဲ့ နှင့် ဆေးလက်တွေ့ပါရဂူဘွဲ့ များ သင်ကြားပေးသည်။ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် အမှတ်မြင့်ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ကျောင်းသား ဦးရေ ၃၀ဝ ဝန်းကျင်ခန့်ကို လက်ခံသင်ကြားပေးသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးသည် Educational Commission for Foreign Medical Graduates က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၅ ကျောင်းအနက် တစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်သည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဆေးပညာဌာနခွဲ Branch Medical Faculty တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဆေးပညာဌာန Faculty of Medicine အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးInstitute of Medicine, Mandalay အဖြစ် သီးခြားတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၃၆ယောက်ကို ဆေးပညာဘွဲ့ MBBSအတွက် စတင်သင်ကြားပေးသည်။ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို ၁၉၆၈ခုနှစ်တွင် ဇီဝကမ္မဗေဒဘွဲ့လွန်သင်တန်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် University of Medicine, Mandalay သို့ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၅၄ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးကို တက္ကသိုလ်ဋ္ဌာနမှူးမှ ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်သည်။ ၁၉၆၄ တွင် Institute of Medicine, Mandalay အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ပါမောက္ခချုပ် မှ ကျောင်း၏ ဦးဆောင်မှုတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးရှိ ဌာနများကို တည်ထောင်ခဲ့သော ခုနှစ်များမှာ -
၁၉၆၀ တွင် အဏုဇီဝဗေဒဌာန
၁၉၈၇ တွင် ဇီဝဓာတုဗေဒဌာန
၁၉၅၄ တွင် ခန္ဓာဗေဒဌာန၊ ဇီဝကမ္မဗေဒဌာန
၁၉၆၄ တွင် ကလေးကျန်းမာပညာဌာန၊ မြန်မာစာဌာန၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ ဓာတုဗေဒဌာန၊ ရူပဗေဒဌာန၊ သတ္တဗေဒဌာန၊ ရုက္ခဗေဒဌာန
၁၉၉၀ တွင် အရိုးရောဂါကုသမှု ဆေးပညာဌာန
၁၉၅၇ တွင် သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆေးပညာဌာန၊ မှုခင်းဆေးပညာဌာန၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန
၁၉၅၆ တွင် ဆေးဝါးဗေဒဌာန၊ ရောဂါဗေဒဌာန၊ ဗက်တီးရီးယားဗေဒဌာန၊ ဆေးပညာဌာန၊ ခွဲစိတ်ပညာဌာန
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်းခ အမ်ဘီဘီအက်စ်
3.1. ဘာသာရပ်များ ပထမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
3.2. ဘာသာရပ်များ တတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
3.3. ဘာသာရပ်များ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်းခ အမ်ဘီဘီအက်စ်
3.4. ဘာသာရပ်များ အလုပ်သင်ဆရာဝန်
နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်းခ အောင်မြင်ပြီးဆုံးသူတိုင်း မန္တလေးသို့မဟုတ် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ရှိ သင်ကြားရေးဆေးရုံများတွင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ၁နှစ်တာ လက်တွေ့ပညာသင်ယူရသည်။ လက်တွေ့သင်ယူရသော အချိန်ကာလများမှာ-
အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ၁ နှစ်တာ လက်တွေ့ပညာသင်ယူပြီးသောအခါ ဆေးပညာဘွဲ့ MBBS အပ်နှင်းခြင်း ခံရသည်။
Wikipedia: ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)